नेपालमा असार-साउनमा कोरोनाका संक्रमित बढ्न सक्छन् : डा. पाण्डे
'डर नमानौं, भौतिक र मानसिक रुपमा तयार बनौं'
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या २ सय ८१ पुगिसकेको छ। एक महिलाकाे त ज्यान नै गइसकेकाे छ।
संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेका बेला त्रास पनि छाएको छ। यस सन्दर्भमा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले डर नमान्न र भौतिक तथा मानसिक रुपमा तयार हुन अपील गरेका छन्।
मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, नेपालमा असार र साउनमा कोरोना संक्रमण धेरै बढ्नेछ। यो अवधिमा हजारौं जनालाई संक्रमण हुनेछ। तीमध्ये ८५ प्रतिशतलाई सामान्य लक्षण देखिएर आफै निको हुनेछ। बाँकी १५ प्रतिशतमध्ये आधालाई अस्पतालको सामान्य उपचारले निको हुनेछ। बाँकी ७/८ प्रतिशतलाई आइसीयु र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्नेछ। त्यसको आधाभन्दा कम अर्थात ३ प्रतिशतको मृत्यु हुनसक्छ।
मृत्यु हुनेमा जोखिम वर्ग जस्तै जेष्ठ नागरिक, दीर्घ मुटु/फोक्सो/मृगौलाका बिरामी, क्यान्सरका तेस्रो तथा चौंथो स्टेजका बिरामी, अंग प्रत्यारोपण गरेका बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी र इम्युनिटी सप्रेस भएका बिरामी हुनेछन्।
अहिलेसम्म नेपालमा सक्रिय उमेरका व्यक्तिमा संक्रमण धेरै देखिएको छ। संक्रमण कम भएकोले भाइरसको लोड थोरै छ। तर संक्रमण बढ्दै जाँदा जोखिम वर्गका संक्रमितलाई आइसीयु÷ भेन्टिलेटर आवश्यक हुनेछ। करिब २–३.५ प्रतिशतको मृत्यु हुन सक्छ।
सीमा नाका पूर्णरुपमा सील गर्ने, संक्रमित क्षेत्र सिल गर्ने, आवतजावत बन्द गर्ने, सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय अबल्मबन गर्ने, डर÷त्रास नमान्ने एवम् आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउने गर्दा यो रोगसँग लड्न सकिन्छ।
यसको लागि हामी मानसिक तथा भौतिक रुपमा तयार हुनु पर्दछ। भ्रम र हल्लाको भरमा त्रस्त हुनु हुँदैन। आधिकारिक सूचना लिने र विज्ञका सल्लाह अनुशरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।।
एउटा कुरा हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ कि कोरोना संक्रमण समुदायमा हल्का रुपमा फैलिएको छ। त्यसैले फाट्टफुट्ट रुपमा धेरै जिल्लामा देखिएको छ। नेपालमा सक्रिय उमेरका व्यक्ति तथा बालबालिकामा संक्रमण देखिएको हुँदा घर बाहिर नजाने, अत्यावश्यक काम परे मास्क, चस्मा तथा पञ्जा लगाएर जाने, भौतिक दुरी कायम गर्ने, भीडभाडमा नजाने, सरसफाईमा ध्यान दिने गर्नु आवश्यक छ।
जीवन रह्यो भने कमाउन सकिन्छ। जीवन नै नरहे कमाएको के अर्थ रह्यो र ? त्यसैले घरमै बसौं, सुरक्षित बनौं।